Daawo: Dahabshiil oo Banki ganacsi ka furtay Hargeysa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Shirkadda Dahabshiil ayaa maanta magaalada Hargeysa ka furtay Baan ganacsi, iyadoo sidoo kalana daaha laga rogay daar shirkaddu dhisatay oo ka kooban 7 dabaq.
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud(Siilaanyo), ayaa maanta Xariga ka jaray Bangiga Dahabshiil oo laga hirgaliyay Bartamaha Hargeysa.
Munaasibada Furitaanka waxaa ka soo qayb galay Madaxweynaha, xubno golihiisa wasiirada ka tirsan, Madaxda Dahabshiil, Madaxda Xisbiyada, Xildhibaano, Madaxdhaqameed, Culima’udiin, aqoon yahan, ganacsato iyo marti sharaf kale.
Bangigan ayaa ah Bangigii ganacsi Islaami ah ee ugu horeeyay oo Somaliland laga furo, waxaanu suuro galinayaa maalgalin dhanka dhaqaalaha ah iyo ka qayb qaadashada horumarka sida uu sheegay maareeyaha guud ee Dahabshiil Group.
Dhismaha laga furay bangigan oo sidoo kale qaybihiisa kale laga furi doono xarumo ganacsi oo muwaadiniin Reer Somaliland ahi leeyihiin ayaa dhismihiisu socday mudo 7 sano ah, iyadoo ay ku baxday lacag dhan 12 Milyan oo Dollar, sida uu sheegay C/rashiid Dahabshiil oo ah gudoomiyaha Shirkadda Dahabshiil.